२३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०८:५०
काठमाडौं, २३ जेठ:शुक्रवार, जुन ५ मा, वर्षको दोस्रो चन्द्रग्रहण देखिन लागेको छ, जुन नेपालमा पनि देख्न सकिन्छ। यस वर्षको पहिलो चंद्रग्रहण १० जनवरीमा भएको थियो। यो चन्द्रग्रहण जून ५ मा साँझ ११ बजे शुरू हुनेछ र शनिबार, जून ६ मा अपरान्ह २ः१५ मा समाप्त हुन्छ। यो भनिएको छ कि ग्रहणको प्रभाव क्वार्टरमा १२ः३० मिनेटमा अधिकतम हुनेछ। यो ग्रहण एशिया, यूरोप, अष्ट्रेलिया र अफ्रिकामा देख्न सकिन्छ।
आज रात्री हुन लागेको चंद्रग्रहण भनेको पिनम्ब्रल हो अर्थात् सब छाया ग्रहण हो। त्यो हो, पृथ्वीको मुख्य छायाको बाहिरी भाग चन्द्रमामा खस्नेछ, जसको कारण यसको चमक फीका हुन्छ।
के तपाईं यो चन्द्रग्रहण देख्न सक्नुहुन्छ?
टिभी वेंकटेश्वरनका विज्ञान प्रसारका वरिष्ठ वैज्ञानिक भन्छन् , “यो उप छाया छाया ग्रहण हो, त्यसैले ग्रहणको प्रभाव धेरै देखिने छैन। चन्द्रमामा हल्का छाया मात्र देखा पर्नेछ, अर्थात चन्द्रमा एक कालो रंग मात्र देखा पर्नेछ। केवल छड छड प्रतिशत चन्द्रमा मात्र कभर गर्नेछ। ” उनका उनुसार यो ग्रहण यति सजिलै देख्न सकिदैन। यदि चंद्रग्रहण यसको पूर्ण प्रभावमा छ र तपाईंले धेरै ध्यान दिएर हेर्नुभयो आकाश पनि स्पष्ट हुनुपर्दछ, त्यसपछि तपाईं चन्द्रको उत्तरी र दक्षिणी भागको चमकमा केही फरक देख्नुहुनेछ।
पिनम्ब्रलको अर्थ के हो?
भेन्कटेश्वरनका अनुसार, यसलाई बुझ्नका लागि पहिले महत्त्वपूर्ण छ कि छायाहरू दुई प्रकारका छन्। कुनै पनि वस्तुले कि रोकिन्छ प्रकाशले दुई प्रकारका छाया उत्पादन गर्दछ। एउटा अँध्यारो र घना हुने अम्ब्राल छाया हो। दोस्रो, जो प्रकाश र फैलाइनेछ, लाई पेनम्ब्रल भनिन्छ। यी दुई बीचको भिन्नता होः यदि तपाईंप्रकासको स्रोतको क्षेत्रमा उभिरहनुभएको छ भने सम्पूर्ण प्रकाश स्रोत कभर हुनेछ। तर यदि तपाईं पीनम्ब्रल क्षेत्रमा उभिरहनु भएको छ भने पूरै प्रकाश स्रोत कभर हुने छैन।
यो महिना सूर्य ग्रहण पनि
वर्ष २०२० मा कुल छवटा ग्रहणहरू छन्। यी मध्ये दुई सौर्य ग्रहण हो र चार चंद्रग्रहण हुनेछन्। यी मध्ये एक चन्द्रग्रहण यस वर्षको सुरूमा १० जनवरीमा भएको थियो, जस पछि यो ५ जुन मा हुनेवाला छ। आज चन्द्रग्रहण देखा पर्दा, चन्द्रग्रहण ५ जुलाई र ३० नोभेम्बरमा पनि देख्न सकिन्छ। यस बाहेक, एउटा सूर्यग्रहण २१ जुन २१ र अर्को १४ डिसेम्बरमा हुनेछ।
१६ असार २०७७, मंगलवार १३:३८
२६ जेष्ठ २०७७, सोमबार १०:१७
२३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १९:४३